နေကြာ – Grab Love Story
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ (သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့)
ဖုန်းမြည်သံနှင့်အတူ…. မြတ်မြတ် နိုးလာသည်…. အိပ်ချင်မူးတူးဖြင့်ကောက်ကိုင်ကာ…….
ဟယ်လို….. မြတ်မြတ်…. သမီး…. ဆယ်နာရီအရောက်…. ရုံးကို လာခဲ့ပေးပါဦး….. အရေးပေါ် ညွှန်းကြားစာ ဝင်လာလို့….. ဝိုင်းလေး ပါ ခေါ်လာခဲ့ပါ…..
ဟာ…. တီချယ်…. ဒီနေ့ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့လေ…. မြတ်တို့ မအားဘူး…..
မြတ်မြတ်ရယ်…. ငါက ရုံးရဲ့ လက်ညွှန်ပါ…. ညည်းတို့ထက်ပိုတောင်နားချင်သေးတယ်….. ခုက ဒီနေ့ တာဝန်မှူးကျတဲ့ စိုးစိုးက အရေးပေါ်ဝင်လာတဲ့ ကြေးနန်းကို လှမ်းပြောလို့ပါ….. ညည်းတို့ ဒီနေ့လည်မယ့် အစီအစဉ် လုံးဝ မပျက်စေရဘူး…. ညည်းတို့ရည်းစားတွေဆီက တခါမှ မရဘူးတဲ့ စပတ်ရိုက်ကို ဝန်ကြီးဌာနက ပေးမှာ…. လာခဲ့…. ဆယ်နာရီ အရောက်နော်…. နောက်ကျရင် မရဘူး… ကန့်သတ်နဲ့ လာတာ….
ဟဲဟဲ…. တီချယ် စပတ်ရိုက်က ဟို့နေ့က အခွန်ရုံးလို အုန်းဒိုင်း တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်….
ကောင်မ….. စော်စော်စီးစီး နိမိတ် မရှိ…. နမာ မရှိနဲ့… လာဆိုလာခဲ့…. ယူနီဖောင်းနဲ့နော်….. ဒါပဲ…..
မြတ်မြတ် ဖုန်းချပြီးသည်နှင့်…. ခြုံထားတဲ့စောင်ကိုဖယ်လိုက်တော့…. ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအုံးအိပ်နေတဲ့ ဝိုင်းလေးကိုတွေ့ရသည်…. မြတ်မြတ်သည် ဝိုင်းလေး ခေါင်းမှ ဆံပင်တွေကြား လက်ထိုးထည့် ဖွဖွလေး အုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး….
ဟုတ်…. မမ…. ဖုန်းပြောနေတာ ဝိုင်း အကုန်ကြားတယ်….
အချိန်လဲ မရှိတော့ဘူး…. ရေချိုးခန်းထဲ အတူတူသွားကျမယ်… လာ….
မမ… ဖြစ်ပါ့မလား…. အများသုံးတာကို…..
ရပါတယ်အေ….. ထတော့…. သွားမယ်…. မြန်မြန်လုပ်….
နေပြည်တော်…. အစိုးရဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရာ အရပ်….. အမျိုးသမီး အပျို ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရာ (…)ရဲ့ အဆောင်တစ်ခုရဲ့ ရေချိုးခန်းတစ်ခုမှာတော့ (….)ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုရဲ့ ဦးစီးဌာန တစ်ခုက ခရိုင် ရုံးအုပ်ကြီး မစိုးမြတ်မြင့်ဦး နှင့် ၎င်းဌာနရဲ့အငယ်တန်းစာရေးဝန်ထမ်းလေး မဝိုင်းမို့မို့အောင် တို့သည်…. ရေချိုးခန်းတံခါးကို ချက်ထိုးကာ…. ရေကန်ကို မှိထိုင်လျက်…. တစ်ယောက် သောက်ဖုတ်ကို တစ်ယောက်က ထိုးနှိက်ကလီကာ…. ပွတ်သပ် နမ်းရှုပ်လျက်…. သူတို့နှစ်ယောက်လိုချင်သော ဆန္ဒတစ်ခုနောက်ကို တတ်ညီ လက်ညီ အတူကကွ ဆောင်ရွက်နေကျသည်မှာ…. ပထမဆုံးမဟုတ်တော့ပဲ… သုံးနှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံတွေကြောင့် အပေးအယူမျှနေကျလေသည်……
……………………………………………………………မစိုးမြတ်မြင့်ဦး နဲ့ မဝိုင်းမို့မို့အောင်
စိုးမြတ်မြင့်ဦး ခေါ် မြတ်မြတ်သည်… ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံဘွဲ့တစ်ခုရကာ…. အဖေ ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူး မြင့်ဦး၏ အရှိန်ဖြင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဦးစီးဌာနတစ်ခုတွင် စာရေးကြီး အဆင့်ဖြင့် အလုပ်ဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်……
ဝိုင်းမို့မို့အောင် ကတော့ ဗိုလ်မှူး မြင့်ဦးတို့ တပ်ထဲက ရဲဘော်တစ်ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်ပြီး မိဘများက ဗိုလ်မှူးမိသားစု ကိစ္စများကို တစ်သက်လုံး လုပ်ကိုင်ပြုစုပေးလာသလို ဝိုင်းလေး ဘွဲ့ရဖို့အတွက် အမေဖြစ်သူ မို့မို့မှ ဗိုလ်မှူးမြင့်ဦးထံ လိုလေးသေ့မရှိ… ပြုစုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည် အပြင်…..သမီး ဝိုင်းလေး ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်ရဖို့ အတွက် အဖေဖြစ်သူ ရဲဘော် ဝင်းအောင်မှ နောက်တန်းပြန်ရောက်ချိန်… အနားမယူပဲ ဗိုလ်မှူးကတော် ဒေါ်ဇင်မာစိုးရဲ့ လိုချင်တာမုန်သမျှ ခိုင်းတာ စိတ်ပါလက်ပါ သိမ်းကြုံး လုပ်ပေးခဲ့သည့်အတွက်….. နေပြည်တော်ရှိ မြတ်မြတ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဦးစီးဌာနမှာ အလုပ်သင် ခေါ် လုပ်အားပေး ခေါ် နေ့စားလပေး ဖြင့် အလုပ်ရခဲ့သူဖြစ်သည်….
မိဘနှစ်ပါးရဲ့ လိုအပ်ချက်မရှိ အလိုက်သတိ လုပ်ကိုင်တတ်မှုတွေကြောင့် ဗိုလ်မှူးလင်မယားမှာ ဝိုင်းလေးအား သမီးဖြစ်သူ၏ အဆောင်တွင် အတူတူနေထိုင်စေရန်ကိုပါ စေတနာပို၍ စီစဉ်ပေးခဲ့ကြလေသည်…..
မြတ်မြတ် နှင့် ဝိုင်းလေးတို့ အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင် ညီအမ အရင်းတွေလို အတူတူနေထိုင်ကာ ရုံးတတ် ရုံးဆင်း ပြုလုပ်နေထိုင် စားသောက်လာကျရင်း….. မြတ်မြတ်ရဲ့ ညီမဖြစ်သူ စိုးမြင့်မြင့်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့တွင်တော့……. တပ်တွင်း ကျောင်းဆရာမလေး စိုးမြင့်မြင့်ဦးကို ဗိုလ်ကြီး အောင်မိုးမြင့်မှ မင်္ဂလာဦးည…. ပတ်ပတ်ဆက်ဆက် လိုးနေကျသံကို တစ်ဖက်ခန်းက ပင်းပန်းစွာ အိပ်ပျော်နေကျတဲ့ မြတ်မြတ် နဲ့ဝိုင်းလေးတို့ နိုးလာကျပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး တခါမှ မကြည့်ဖူးတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်း……
ထို့နေညမှ စကာ….. မြတ်မြတ် နဲ့ဝိုင်းလေးတို့သည် အမြဲပူးတွဲနေထိုင်ခဲ့ကျပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရုံးအသိုင်းအဝန်းအလယ်မှာ ဆရာ တပည့် နှစ်ယောက်ဆိုတာထက် ညီအမနှစ်ဦးလို့ပင် ထင်ရလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်….
ဝိုင်းလေး ပင် အငယ်တန်းစာရေးအဖြစ် အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းဖြစ်သွားသည့်တိုင် အစိုးရ အခန်းမယူပဲ မြတ်မြတ်အခန်းမှာပင် နေထိုင်နေခဲ့လေသည်……
မြတ်မြတ်နဲ့ ဝိုင်းလေးတို့ ရေချိုးခန်းထဲတွင် စိတ်ကြိုက် အတူ ပြီးစီးအောင် ပြုလုပ်ပြီး…. ရေချိုးကာ… အခန်းထဲသို့ ပြန်လာပြီး ယူနီဖောင်းလှဲ… အလှပြင်ကျလေသည်….
မမ အစည်းအဝေးက ကြာမှာလား….
တီချယ်ကတော့ မကြာဘူးပြောတာပဲအေ…. ဘာလုပ်မလို့လဲ……
မမကလဲ သိနေတာကိုး…. လယ်ဝေး…. ဖုန်းဆိုင်က ကိုဖြိုးက ဘုရားသွားဖို့ ချိန်းထားတာကိုး…..
သူ့အပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ် မမ…..
အေးပါ… ဟိုတယ်ဆိုမှ ပေးကျွေးနော်…. ချစ်သူလမ်းကြားက ခြုံထဲဆိုရင်တော့ မျက်နှာကို သောက်ဖုတ်နဲ့ တတ်ပွတ်ပြီးပြန်ခဲ့…..
စိတ်ချပါ… မမ ကလဲ…..
ညည်းနဲ့အေ…. ညွှန်းမှူးကို ပေးကျွေးပါ့လား…. ရာထူးလဲတိုး…. အဆင်လဲပြေ…. ခုလို နိုင်ငံရေး အခြေအနေအောက်မှာ ရာထူးတွေ ဆက်တိုက်တိုးဖို့ဆိုတာ ညွှန်မှူး လက်ထဲမှာ အေးဆေးပဲ….
မမ ကလဲ…. ဝိုင်း က အခွင့်အရေးမရသေးလို့ပါနော်… ဟွင်းဟွင်း…..
အမလေး…. ဝိုင်းရယ်…. ညည်း ညွှန်မှူးနဲ့ လိုးဖို့အတွက် မမက အရင် သွားကုန်းပြီး…. ဝိုင်းမို့မို့အောင်က ဘဘဆီက အကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ ဆိုပြိး သွားပြောရမလား…
အဲလိုဆိုကောင်းတာပေါ့…. မမရဲ့…. ဝိုင်း အသေအချာ ကျေးဇူးဆပ်ပါ့မယ်…..
မမ က ဘာလိုချင်လို့လဲ….
ညီမလေး မြင့်မြင့်ရဲ့ ယောကျာ်း ဗိုလ်ကြီး အောင်မိုးမြင့် ရဲ့ ဆောင့်လိုးနိုင်တဲ့ အားလို့မျိုးနဲ့….. ညည်းဘဲ ကိုဖြိုးရဲ့ လီးလိုမျိုး ရှည်ရှည်တုတ်တုတ် ရှိတဲ့ ဘဲမျိုးကို ဘယ်သူမှ မသိအောင် တိပ်တိပ်လေးခိုးစားချင်တယ်…. ငါ ငွေတော့ မပေးနိုင်သလို….ငွေလည်း မယူဘူး…. နှုတ်လုံဖို့ အဓီကပဲ… ရှာပေးမလား…..
ဟုတ်ပါပြီ.. ရှင်…. မမမြတ် အမိန့်အတိုင်း ဝိုင်းနေပြည်တော်က ယောကျာ်းတိုင်း အလိုးခံပြီး အရည်းချင်းမှိတဲ့ ဘဲကို မေးစမ်းကြည့်ပါ့မယ်….. ဟွန်း……
ကဲ ဝိုင်းလေး….နောက်ကျနေပြီး…. သွားကျရအောင်…. ဆိုင်ကယ်သော့ယူခဲ့ဦး…….
ဟုတ်ကဲ့…. ဟုတ်ကဲ့….. မမ
မြတ်မြတ် နဲ့ ဝိုင်းလေးတို့ ဆိုယ်ကယ်တစ်စီးဖြင့် ရုံးသို့လာခဲ့ကြသည်…..လမ်းတွင်…..
မမ..မမ…. ဒီနေ့ နေပြည်တော်က နေကြာတွေချည်းပါလား…. ပြီး ရုံးသွားတာ ညီမလေးတို့ရုံးတင်မကဘူး…. တခြား ဌာနတွေပါ တွေ့နေရတယ်….
ဟုတ်တယ်….. ဝိုင်းလေး….. ဘာခိုင်းဦးမလဲ မသိဘူး……
မြတ်မြတ်တို့ ရုံးရောက်ပြီး လက်မှတ်ထိုးကာကိုယ်နေရာတွင် ကိုယ်ထိုင်နေစဉ်….လက်ညွှန် တီချယ် ဒေါ်ရီရီမြင့် ရောက်လာပြီး…. တာဝန်မှူးစိုးစိုး အား….
သမီး…တီချယ်အခန်းထဲ တခါတည်း လိုက်ခဲ့လိုက်….
ပြီး…. မြတ်မြတ်… သမီးက လူစုံအောင် စောင့်… ဆယ်နာရီ ဆယ်ငါးမိနစ်မှာ လူစာရင်းနဲ့ အခန်းထဲဝင် လိုက်ခဲ့…. အစည်းအဝေးကို ဆယ်ခွဲစမယ် ပြောခဲ့လိုက်….
တီချယ်တို့ အခန်းထဲဝင်သွားသည်နှင့်….. မြတ်မြတ်ဖုန်းထဲကို မတ်ဆေ့တစ်ဆောင်ဝင်လာသည်…. မတ်ဆေ့ဖတ်ပြီးသည်နှင့် ခုံမှထကာ…..
ကဲ…. ဝိုင်းလေး….. မမကို ဝိုင်းကူကောက်ပေးပါဦး…. Toilet ခဏသွားချင်လို့…..
ဝိုင်းလေး…. မြတ်မြတ်ဆီမှ လူစာရင်းစာရွက်ယူကာ…. မြတ်မြတ်အား သူသိတယ် ဆိုတဲ့ အပြုံးမျိုးပြုံးပြကာ… အခြားဝန်ထမ်းတွေဆီ လှည့်ထွတ်သွားလေသည်…..
မြတ်မြတ်… toilet သွားသည် လမ်းတွင် ဖုန်းက မတ်ဆေ့ကို သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်နေသည်….. မတ်ဆေ့မှာ တီချယ် ရီရီမြင့်က လှမ်းပို့ပေးလိုက်တာ ဖြစ်သည်….. မတ်ဆေ့ မှာ….
ညွှန်မှူးက ခုတွေ့ချင်တယ်ပြောတယ်…. သူ့အခန်းထဲကစောင့်နေတယ်….. ဒီဘက်က အလုပ် တီချယ် ဇယားရွှေ့လိုက်မယ်….သွားလိုက်ဦး…. သေချာ ပြုစုလိုက်နော်… အစည်းအဝေးပြီးရင် တီချယ်လဲ လာခဲ့မယ်…..
စာဖတ်ပြီး….မြတ်မြတ်… နောက်က လူအခြေအနေ တချက် ခိုးကြည့်ကာ… ညွှန်မှူးရုံးခန်းရှိရာ အပေါ်ထပ်သို့ ဓာတ်လှေကားဖြင့် တတ်လာသည်……
မြတ်မြတ်မှာ အဖေ ဗိုလ်မှူးရဲ့ အရှိန်အဝါဖြင့် လုပ်သက် သုံးလေးနှစ်အတွင်း (-) ဦးစီးဌာန နေပြည်တော် ရုံးချုပ်ရဲ့ ရုံးအုပ်ကြီး အဆင့်ထိ ဖြစ်ခဲ့တော့လည်း… အပျိုကြီး မြတ်မြတ်… မတင်းတိမ်နိုင်ပါ…. ညီမဖြစ်သူရဲ့ ယောက်ျား မတ်ဖြစ်သူရဲ့ အဖေမသိ….. ညီမ မသိအောင်…. နှိမ်ချဆက်ဆံမှုကို မခံနိုင်…. ဒါကြောင့် ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ကြိုးစားခဲ့သည်…. ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ အဖေဖြစ်သူနဲ့ မတ်ဖြစ်သူတိုမှာ အလုပ်ရှုပ်နေကျလို့… သူရာထူးတတ်ဖို့ အကူအညီ လုပ်မပေးအားစဉ်… လက်ရင်းဆရာဖြစ်သူ တီချယ် ရီရီမိုးမှ CDM ဝင်သွားတဲ့ ဦးစီအရာရှိနေရာအတွက် သူမကို ဝင်လုပ်မလားလို့ မေးရာ… ဝမ်းသာအားရလက်ခံခဲ့သည်…. ထိုသို့ ပြောဆိုပြီး မတ်လရဲ့ တနင်္ဂနွေတစ်ခုတွင်…. တီချယ်မှ ရုံးသို့လာရန်ပြောလို့ သွားခဲ့သည်….. တီချယ်က ရုံးရဲ့သီးသန့်ခန်းတစ်ခုတွင် မြတ်မြတ်ကို ခေါ်တွေ့ကာ….
သမီး…မနက်ဖြန် ရုံးစတတ်တာနဲ့ လွတ်သွားတဲ့ ဦးစီးအရာရှိနေရာကို စာထုတ်တော့မှာ…. ဘာ အင်တာဗျူးမှ မရှိဘဲ စိတ်ကြိုက်ခန့်ပိုင်ခွင့်က အပေါ်ထပ်က ဟိုတလောက ပြောင်းလာတဲ့ တပ်က ညွှန်မှူး အဘ ဦးသိန်းမောင်ပဲ…. အဲ့တော့ အဲ့cdm ဦးစီးတွေနေရာအတွက် သောကြာနေ့က အစည်းအဝေးလုပ်တော့ တီချယ်တို့ လက်ညွန်တွေက လျားထားနှစ်ယောက်ဆီပေးရတယ်…. တီချယ်က သမီးနဲ့ ငွေစာရင်းက အေးမြတ်မွန်နဲ့ကို ပေးလိုက်တယ်….မနေ့က အေးမြတ်မွန်ကိုခေါ်ပြီး ညွှန်မှူးနဲ့တွေ့ပေးလိုက်တော့ အေးမြတ်မွန်တော့ သေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီ… ညွန်မှူးက သဘောကျလွန်းလို့ ဒီနေ့ သမီးကိုတောင် မတွေ့တော့ဘူးပြောနေတာ…
ရှင်…ဒါဆို…. သမီးက မသေချာတော့ဘူးပေါ့…. ဒါမယ့်…. တီချယ် သိမှာပါ…. မွန်မွန်… ဘယ်လောက် ဂါ သွားလဲ…. အဲထက်ပိုစေရမယ်…. သမီး အာမခံတယ်…… အဘကို ပြောပေးပါနော်….တိချယ်…..သမီး ဒီရာထူးကို အရမ်းလိုချင်လို့ပါ…..
မြတ်မြတ်… အလောတကြီးဖြင့် ခုံမှထကာ တီချယ်ရှေ့ ဒူးတုတ်ထိုင်ကာ…. ခြေသလုံးဖက်၍ တောင်းပန်လေသည်…
ညည်းက ငါ့တပည့်အရင်းပါ မြတ်မြတ်ရယ်…. ညည်းအဖေနဲ့ ငါ့နဲ့လဲ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ….ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ…. ငါပါးစပ်က မပြောတော့ဘူး…. မနေ့က မနက်က မွန်မွန်ကို ရုံးကိုခေါ်လိုက်ဖို့ အဘ က လှမ်းပြောတော့ သူတို့မရောက်ခင် ရုံးအရင်လာပြီး အဘကို မွန်မွန် ဘယ်လောက် ဂါမလဲ သိရအောင် cctv ခိုးတတ်ပြီး ငါ့ရုံးခန်းထဲက စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်….
ရော့….. ပြီးရင်….. တီချယ်ရုံးခန်းကို လာခဲ့…….
မြတ်မြတ် တီချယ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Record video ကို ဖွင့်ကြည့်ရာ….. ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရတာက…. ထိပ်ပြောင် ဗိုက်ပူနဲ့ အဘ ​ရှေ့တွင်…. မွန်မွန်မှာ ဒူးတုတ်ထိုင်ပြီး လက်အုပ်ချီထားသည်…. ပြီး အဘကို ဦးချ ကန့်တော့လေသည်…. မွန်မွန် ကန်တော့နေသည်မှာ သာမာန်ထက် ​နှေးပြီး လိုအပ်သည်ထက် ခါးကုန်းကာ ဖင်တွေက မိုးပေါ်မြှောက်နေသည့်အချိန်က ပိုကြာနေသည်ဟု မြတ်မြတ် တွေးနေမိသည်…. ဦးချ ကန့်တော့ပြီးတော့… အဘက…
သမီးမှာ ဦးစီးအရည်းအချင်းနဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့ ယုံကြည်လား……
အဘ… သိပ်များကြီး မမေးတော့ပါဘူး…. သမီးနောက်မှာလဲ နောက်လူတွေရှိသေးတော့…. အဘ သမီးကို ဒီအလုပ်ကလေး အစမ်းခိုင်းချင်တယ်…. ရော့…..
အဘက သူ့အိတ်ကပ်ထဲက ခေါက်ထားတဲ့ စာရွက်ကို မွန်မွန်အားထိုးပေးလေသည်….. မွန်မွန် စာဖတ်ပြီးအဘအား မျက်လုံးပြူးဖြင့် ပြူးကြည့်နေစဉ်….
သမီး မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်…. ချက်ချင်းပြန်လို့ရတယ်…. လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ သမီးကို တနင်္လါနေ့ကျရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လွတ်နေတဲ့ ဦးစီးအရာရှိ ၂၈ ဦးနေရာထဲက တစ်နေရာရပြီ…. သမီးရဲ့ လုပ်အားပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး…. သမီး သွားချင်တဲ့ ဦးစားပေး အစဉ် ဆယ့်ငါးနေရာကို အဘ စဉ်းစားပေးမယ်….
မွန်မွန် စာရွက်ကိုင်ကာ အဘအားငေးကြည့်နေပြီး ခဏကြာတော့…..
ကဲ သမီး…. ဘာလုပ်မလဲ…. အဘက အချိန်မရှိဘူး…. နောက်ထပ်လူရှိသေးတယ်…..
မွန်မွန်မှာ စာရွက်ကို စလင်းဘက်အိတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပြီး တုန်တုန်ရင်ရင်ဖြင့်
အဲလိုလုပ်စမ်းပါ…. ငါ့သမီးက ချောပါတယ်ဆိုမှ…. လာ…လာ…. အဘဆီလာ….
ညွန်မှူးသည် ခုံကို မွန်မွန်ရှေ့တည့်တည့်လှည့်ကာ… ဒူးနှစ်ချောင်းကားပေးလိုက်ရာ…. မွန်မွန် ဒူးတုတ်လျက် ညွှန်မှူး ဒူးနှစ်လုံးကြားထဲ တရွတ်တိုက်ဝင်သွားလေသည်…..
သမီး….သမီး စေတနာထားရင် အဘ စောင့်ရှောက်မှာပါ…
မွန်မွန်မှာ ညွှန်မှူးပေါင်ကြားထဲမှ ဒူးတုတ်ထိုင်နေရင်း အဘ စကားဆုံးသည်နှင့်….. ပုဆိုးကို ဖြေချလိုက်သည်…. ပြီးတစ်ဆက်တည်း… ညွှန်မှူးရဲ့ ဘစ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်သည်…. ထောင်းခနဲခုန်ထွတ်လာသော ဒစ်ပြုပ်နေတဲ့ ငါးလက်မနီးနီးလီးကြီးကို မွန်မွန် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး အသားနှကို လျှာဖျားဖြင့် စတင် မထိတထိတို့ကာ ပုလွေပညာကို အစွန်းကုန်ထုတ်သုံးပြီး…. သူမ အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကြိုးစားနေလေသည်….. အဘမှာ ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် ခေါင်းနောက်ပစ်ကာ မွန်မွန်ရဲ့ အရည်းအချင်းတွေကို အားရပါးရ ခံစားနေလေသည်….
ဆယ့်မိနစ်ခန့်အကြာ….. အဘက ခုံမှ ထရပ်ကာ မွန်မွန်အားဆွဲထူလိုက်ပြီး….. စာပွဲခုံးဘက်လှည့်လိုက်သည်…. မွန်မွန်က အတွေ့အကြုံ ရှိသူပီပီ…. ခုံပေါ်လက်ထောက်ကာ ဖင်ကို ကုန်းပေးလေသည်…. အဘက မွန်မွန် ထမိန်က ချိတ်ကို ဖြုတ်၍ ထမိန်ကို ဆွဲချသလို… ဖင်ဖြူဖြူကြီးပေါ်မှာ ကန့်လန့်တင်နေတဲ့ မိုးပြာရောင် အောက်ခံဘောင်းဘီကို ပေါင်ထိ ဆွဲချွတ်ချပြိး…. ကျောပေါ်ကနေ မွန်မွန် ဆံပင်တွေ ဆွဲပြီး မွန်မွန် သောက်ဖုတ်ကို အားရပါးရ ပစ်လိုးနေသည်….. အဘမှာ မွန်မွန်ကို နောက်ကနေ ဆောင့်လိုးရင်း….. ခဏကြာတော့…. တအင့်အင့်….နဲ့ မွန်မွန် သောက်ဖုတ်ထဲ လရည်တွေ ထိုးထည့်ကာ မွန်မွန်ကျောပေါကို ​မှောက်ကျသွားလေသည်……
ခဏကြာတော့ အောက်မှ မွန်မွန်က…..
အဘ… အဘ…. ကန့်တော့နော်…. ထပါဦး… မွန်….လေးလာလို့….
ညွန်မှူး မွန်မွန်ပေါ်မှ ကုန်းထလိုက်ပြီး သူ့ဘောင်းဘီနဲ့ ပုဆိုးကို ပြန်ဝတ်လိုက်သည်….. မွန်မွန်လဲ သူ့အဝတ်များကို ပြန်ကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး အဘရှေ့ မတ်တပ်ရပ် ခါးညွှတ်ကာ…..
အဘ… သမီး… ဦးစီးဖြစ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တာများရှိသေးလားရှင့်…..
သမီး သွားလို့ရပြီးလား အဘ…..
သမီး… မွန်မွန်…. သမီးဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ ဝင်ငွေအရဆုံး…. အတိုင်အတော မခံရဆုံး…. ခု ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရ အလုံခြုံဆုံးနေရာကနု မလိုချင်ဘူးလား….
ညွန်မှူးက စာပွဲပေါ်တွင် စာတစ်စောင် ကောက်ရေးပြီး…. မွန်မွန်အား ပေးလေသည်…. မွန်မွန် စာဖတ်ပြီး ညွန်မှူးအားမော့ကြည့်စဉ် ညွန်မှူးမှ ပါးစပ်ကို လက်ညိုးထောင်ကာ အသံမထွတ်ရန်သတိပေးပြီး…..
ကဲ…. အဆောင်ပြန်တော့…. တနင်္လါနေ့ သမီး ဘယ်ဒေသကျမလဲ…. စောင့်ကြည့်နေတော့…. သွားသွား…….
မွန်မွန်ရဲ့ နောက်က ဖင်ကျောကြီးကို အငမ်းမရစိုက်ကြည့်နေရင်း….. အခန်းထဲတွင် ညွန်မှူးတစ်ယောက်တည်းကျန်သည့်အချိန်…. ညွန်မှူးမှာ စီးကရက်တစ်လိပ်ထုတ်သောက်ရင်း ​မှေးနေလေသည်…. ခဏကြာတော့ ညွှန်မှူး အခန်းထဲကထွတ်သွားလေသည်…..။
သီးသန့်ခန်းထဲတွင် မြတ်မြတ်မှာ တီချယ်ရဲ့ recording video ကိုကြည့်ပြီးနောက်….aircon ခန်းထဲ ချွေးများပြန်နေသလို…. သောက်ဖုတ်ကလဲ စစ်ခနဲ့ စစ်ခနဲ့ဖြင့် အောင့်တတ်နေသည်…..မြတ်မြတ်စဉ်းစားနေသည်မှာ မွန်မွန်က သူ့သောက်ဖုတ်နဲ့ အဘကို အရချိုင့်ကာ ဦးစီးဖြစ်တော့မည်…. မွန်မွန်ဆိုတာ ငွေစာရင်းဌာနမှာ အပျိုကြီးဆိုပေမယ့်…. ညနေရုံးဆင်းချိန်တိုင်း….. ပျဉ်းမနားထိ သွားကာ…. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးနဲ့ လိုးနေကျ….. ယောက်ျားအတည်မယူပဲ သူဌေး တိတ်တိတ်ပုန်းမယားအဖြစ် နေနေသူ….. မြတ်မြတ်က ဝိုင်းလေးနဲ့ကာ ညတိုင်း မိန်းမချင်းအတွေ့အကြုံတာရှိပြီး အပျိုစစ်စစ်…. မြတ်မြတ် သောက်ဖုတ်ထဲ ဘယ်လီးအစစ်မှ မဝင်သေး…. မြတ်မြတ်…ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ…. စဉ်းစားမရဖြစ်တာနဲ့….. ဖုန်းကိုယူကာ…. တီချယ် အခန်းဆီကိုထွတ်လာလေသည်……
အခြေအနေကတော့ အဲဒါပဲ သမီး…. အဘက ငွေထက်… မိန်းမကိုပိုလိုချင်နေတာ…. သမီး ဘာလုပ်ချင်လဲ….
မြတ်မြတ်…. သေချာစဉ်းစားကာ…တီချယ်အား တစ်လုံးချင်းပြောလေသည်…..
တီချယ်….. သမီးလဲ…. မွန်မွန်လို ကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်… တီချယ်…. သမီးကို အဘနဲ့ တွေ့ဖို့ ပြောပေးလို့ ရမလား…..
တီချယ်က ဖုန်းကောက်ကိုင်ကာ အဘရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ဆီကို ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်လေသည်……
ဟယ်လို…. ကျမ လက်ညွှန် ဒေါက်တာ ရီရီမိုးပါ….. အဘနဲ့ အရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့ပါ…..
ဟိုဘက်မှ စကားပြောသံ တိုးတိုးကြားရပြီး ရီရီမိုးက မြတ်မြတ်အား ပါးစပ်ပိတ်နေရန် အချက်ပြပြီး…. ဖုန်းစပီကာကိုဖွင့်ကာ…. စားပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်…..
ဖုန်းထဲမှ တလျပ်လျပ်နဲ့ လမ်းလျှောက်သံကြားရပြီးနော်….
ဟယ်လို တီချယ်…. အဘက နောက်ဆယ့်ငါးမိနစ်ကြာရင် တီချယ်ဆီ ပြန်ဆက်ပေးမယ်တဲ့…..
အော်…. ကျေးဇူးနော်…. မောင်လေး….
ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်…. ရုံးခန်းထဲတွင် တစ်ဦးမျက်နှာ တစ်ဥိ်း ကြည့်နေကျရင်း တီချယ်မှ….
သမီး တစ်ခုခုစားမလား….. ဘာစားပြီးပြီလဲ…..
ဘာမှ မစားချင်သေးပါဘူးတီချယ်ရယ်….. သမီး မရမှာကို စိတ်ပူနေလို့….
အင်းပါ…. သမီးမှာ အတွေ့အကြုံရှိလား…..
ဟင့်အင်း….. တီချယ်…. မရှိဘူး….
အို… သမီးရယ်… ရာထူးက အဲ့လောက်အရေးပါလို့လားကွယ်….
မြတ်မြတ် ခေါင်းငုံသွားကာ…. စီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်ကို သုတ်လိုက်ပြီး….
သမီး ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ တီချယ်…. ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်လိုက်ရင် တဘဝလုံး မိသားစုမှာ အမြဲ နှိမ်ခံနေရတော့မှာ…..
ထိုစဉ်…. ဖုန်းဝင်လာ၍ တီချယ်မှ လက်ကာပြကာ ဖုန်းကိုင်လိုက်ပြီး စပီကာ ဖွင့်လိုက်လေသည်……
ဟယ်လို…. အဘ…. မော်နီးပါရှင့်…..
အော်… ကျမ ပေးထားတဲ့ လျာထားဦးစီးနှစ်ယောက်တည်းက မစိုးမြတ်မြင့်ဦးနဲ့ တွေ့ဦးမလားလို့ မေးကြည့်တာပါ….
ဒီတစ်ပတ်တော့ ဒေါက်တာ တင်တဲ့နှစ်ယောက်တည်းက မနေ့က အေးမြတ်မွန်ကိုပဲ ရွေးပေးလိုက်မယ်…… ဒီနေ့ တခြား လက်ညွှန်တွေရဲ့ လူတွေစစ်မလို့ပါ….
ဟိုလေ…. အဘ…. အချိန်ရရင် ကျမ စကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါ…..
အေးမြတ်မွန်ကို ဦးစီးခန့်လိုက်လို့ ကျမ ဝမ်းသာပါတယ်… စိုးမြတ်မြင့်ဦးကလဲလေ….. အေးမြတ်မွန်လိုပဲ အရည်အချင်းရှိပါတယ်…. အေးမြတ်မွန်ထက် သာတဲ့အချက်တောင်ရှိသေးတယ်…. အဘ…. အဘသိလား မသိဘူး…. ( )တပ်က တပ်ရင်းမှူး pso ဗိုလ်မှူး မြင့်ဦးရဲ့ သမီးပါ….. ပြီး ကလေးကလဲ သူ့အဖေ ဂုဏ်တတ်စေချင်လို့ ဒီရာထူးကို ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် လိုချင်နေပါတယ်…..
အင်း…ကျနော် သိပါတယ်…..ဒေါက်တာ…. ဒါမယ့်…. ထုံးစံအရ လက်ညွှန်တစ်ယောက်လူ နှစ်ယောက်စလုံးကို ရာထူး တိုးပေးရင်ဘမကောင်းဘူးဆိုလားလို့…..
အဲဒါက အစဉ်အလာတွေပါ….အဘ….. ဥပဒေမှ မဟုတ်တာ….. မြတ်မြတ် ကလဲ ဒီတစ်ခေါက် ရာထူးတိုးဖို့ အတွက် ဘာမဆိုပေးဆပ်ရဲပါတယ်…..
အင်း…..ဒေါက်တာကြီးကတော့လေ…. ကဲကဲ…. ဒီနေ့ နေလည် သုံးနာရီလောက် စာထုတ်မှာဆိုတော့….. စိုးမြတ်မြင့်ဦးတော့ တွေ့မနေတော့ဘူး…. ဒေါက်တာကိုယ်တိုင်ပဲ ဒေါက်တာလူနှစ်ယောက်စလုံးကို ရာထူးတိုးပေးသင့်ကြောင်းကို ကျနော် အိမ်ကို လာ ပြောပြလေ….. ကျနော် သဘောကျရင် အဲ့နှစ်ယောက်ကို ဦးစီးအရာရှိတော့ မဟုတ်ဘူး….. ရုံးအုပ်ကြီးတွေ အနေနဲ့ ဒီရုံးချုပ်မှာပဲ ထားမယ်…. ဒေါက်တာကိုလဲ…. လက်ညွှန် အပြင်…. ကျနော့် pso တစ်ယောက်နီးပါး အခွင့်အရေးပေးမယ်…..ကျနော် ကြိုက်တာလေးတော့ ဖြည့်ဆည်းပေးပေါ့်ဗျာ…. ဒေါက်တာက ကျနော် လက်ခံလာအောင် ပြောပြရမှာဆိုတော့ အဲကိစ္စ သဘောတူရင် နောက်ဆယ်မိနစ်ကျရင် ဖုန်းပြန်ဆက်…. လာကြိုမယ်…. ဖုန်းမဆက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော် တခြားလူတွေကို လက်ခံပြောရတော့မယ်… အော်…. အေးမြတ်မွန်ကို ဒီဌာနရဲ့ ဦးစီးအရာရှိခန့်မှာပါ…. စိုးမြတ်မြင့်ဦးပါ ခန့်ရရင်တော့ နှစ်ယောက်စလုံး ရုံးအုပ်ကြီးတွေပေါ့်…..
ညွန်မှူး ဘက်မှ ဖုန်းချသွားလေသည်…..
ဒေါ်ရီရီမိုး ကြောင်အသွားကာ မြတ်မြတ်ကို ကြည့်လေသည်…..မြတ်မြတ်က…..
တီချယ်…. အဲဒါ ဘာသဘောလဲ…..
သမီး…. အဘက သမီးအစား တီချယ်ကို လာခိုင်းတာ….တီချယ် မသွားရင်…. မနက်ဖြန်ကျ ဒီရုံးမှာ မွန်မွန်က ဦးစီးအရာရှိ…. သမီးက ခု ရာထူးနဲ့ပဲ…..
မရဘူး…..မရဘူး….. သမီး မွန်မွန် လက်အောက်မှာ မလုပ်နိုင်ဘူး….. တီချယ် ကူညီပါနော်….
မြတ်မြတ် အရူးတပိုင်းဖြစ်ကာ တီချယ်အား ဇွတ်ပြောဆိုလေသည်….. တီချယ်က…..
သမီး….သမီးအတွက် တီချယ်သွားရင်… တီချယ်ကို မနေ့က မွန်မွန်အတိုင်း…. သူစိတ်ကြိုက် ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာ…
မြတ်မြတ်တွေဝေစွာဖြင့် တီချယ်အား ငေးကြည့်နေပြီး…. အံကြိတ်ကာ တီချယ် မျက်နှာနားထိ တိုးကပ်သွားပြီး…..လေသံလေးဖြင့်……
တီချယ်….. ရုံးချုပ်က လက်ညွှန် ဒေါက်တာကြီး ရီရီမိုး အပျိုကြီးဆိုပြီး ယောကျာ်းအားလုံး အပြင်ပုံစံ ချေနေတယ်ပေါ့…. ဟုတ်လား…. သမီးအဖေ လက်တော့ထဲမှာ တိချယ်နဲ့ အဖေနဲ့ မတ္ထိလာက ဟိုတယ် တစ်ခုမှာ တစ်နေကုန် တစ်ညလုံး လိုးနေကျတဲ့ video file သမီးဖုန်းထဲမှာရှိတယ်…. ကဲ…. အချိန်မရှိဘူး…. ဒေါ်ရီရီမိုး….. ခုချက်ချင်း ညွှန်မှူးဆီသွားပြီး သမီးအစား ခံပေး…. အစဉ်ပြေရင် သမီးဆီဖုန်းဆက်လိုက်….. ရွှေတစ်ကျပ်သားဆွဲကြိုးလာပေးမယ်….. အဘ ဆီ သွားဖို့ ငြင်းလို့ကတော့…ဟောဒီ video ခုချက်ချင်း လိုင်းပေါ်ရောက်သွားမယ်……
မြတ်မြတ်သည် သူ့ဖုန်းထဲမှ ဖွတ်ထားတဲ့ video တစ်ခုကို ဖွင့်ကာ ဒေါ်ရီရီမိုးမြင်အောင် ထောင်ပြလေသည်……
ရီရီမိုး အံသြစွာဖြင့် ဘာတစ်ခွန်းမှ မပြောနိုင်ကာ…. ညွန်မှူးဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ရလေသည်…….။
ဓာတ်လှေကားထဲတွင် မတ်လက အကြောင်းများကို စဉ်းစားရင်း မြတ်မြတ် ညွှန်မှူး အခန်းကို သွားနေသည်…. အဘ မှာ ခုကာလတစ်လျှောက်လုံး တီချယ်နဲ့ မွန်မွန်ကို အချိန်မရွှေး နေရာမရွှေး လိုးကာ…. မြတ်မြတ်ကို ဒီအတိုင်းသာနေစေခဲ့သည်…. ခုချိန်မှ တီချယ်က အသိပေးတော့ မြတ်မြတ် တစ်ယောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေလေသည်…. သူမရဲ့ သောက်ဖုတ်ထဲကို လပြည့်နေကြီးမှာ လီးအစစ်ဝင်တော့မည်…. မြတ်မြတ် မောဟိုက်စွာဖြင့် ညွှန်မှူး အခန်းရှေ့ရောက်တော့…. နေကြာပန်းဝတ်စုံ အပြာရောင်နဲ့ စာရေးမ တစ်ယောက်က
ဟုတ်…. ညွှန်မှူးအခန်းထဲမှာ ရှိပါတယ်…. တံခါးသုံးချက်ခေါက်ပြီး တွန်းဝင်သွားပါ…..
မြတ်မြတ် ညွှန်မှူးအခန်းတံခါးဖွင့်ဝင်လိုက်သည့်အခါ….. ဧည်ထိုင် ဆိုဖာ အရှည်ပေါ်တွင်….. မွန်မွန်မှာ ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ခြေထောက်ထောင် ပေါင်ကားနေကာ….. ပေါင်ကြားထဲတွင် ဗိုက်ပူကြီးဖြင့် ကြည့်ရဆိုးသည့် အဘက မွန်မွန် သောက်ဖုတ်ကို တဘက်ဘက်နဲ့ အတင်းဆောင့်လိုးနေလေသည်…. မွန်မွန်နို့တွေကို ဖိနိုပ်ကြိတ်ဆွဲလိုးရင်း…..
မြတ်မြတ်…. တုန်တုန်ရင်ရင်ဖြင့် အဘနဲ့ မွန်မွန်လိုးနေတဲ့ နေရာနားတိုးကပ်သွားတော….
တအအ. .နဲ့ အော်နေတဲ့ မွန်မွန်မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး အဘခိုင်းသည့်အတိုင်း နောက်လှည့်ပေးလိုက်သည်…..
အဘက သူ့ရှေ့က အပြာရောင်ထမိန်အောက်က မြတ်မြတ်ရဲ့ ဖင်လုံးတွေကို ဖျစ်ညစ်ရင်း…..
ကြီးလိုက်တဲ့…. အိုးကြီးကွာ….. ဒီအိုးထဲ ဘယ်လီးမှ မဝင်ရသေးဘူးဆို ဟုတ်လား….. မြတ်မြတ်….
မိုက်တယ်ကွာ…. ဒီနေ့တော့ မင်းကအဓီက မင်းသမီးပေါ့…. သမီး သောက်ဖုတ်မွှေးတွေ ရိတ်ထားလား….
ရီမိုးက မှာမထားဘူးလား…. လာမှ ဖင်ချည်းချပစ်ဦးမယ်…. သွား…. အခန်းရှေ့က စာရေးမကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ ပြောလိုက်သွား…. ဖြန်း…..
မြတ်မြတ်…. အလျင်အမြန်ပဲ အပေါက်ဝကို ပြန်ပြေးသွားလေသည်….. တံခါးပေါက်ဖွင့်ကာ နောက်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်တော့….. အဘက မွန်မွန်ကို အားနဲ့ပစ်ကျုံးကာ လိုးနေသည်ကို တွေ့ရသည်……။
ဌာနရဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမှာတော့ မွန်မွန်နဲ့ မြတ်မြတ်တို့ ရုံးအုပ်ကြီး နှစ်ဦးကလွဲရင် ရုံးရှိ မိနမ်းသားအကုန်စုဝေးနေသည်….. ရီရီမိုးမှ…..
သမီးတို့ကို ခေါ်ရတာကတော့ အထက်က လျို့ဝှတ်ကြေးနန်းတစ်စောင် မနက်က ရောက်လာလို့….. အဲဒါကတော့ ဒီနေ့တစ်နေကုန်ကို ခုပေးလိုက်တဲ့ နြေကြာဝတ်စုံဝတ်ဖို့ပဲ… ဘယ်သွားသွား…. ဘာလုပ်လုပ်ပေါ့်…. ဟုတ်ပြီးလား…..
အဲဒါပဲ…. ဟိုမှာရှိတဲ့ ဝတ်စုံထုပ်ကို တစ်စုံစီယူပြီး ဒီအခန်းထဲမှာပဲ အဝတ်လှဲဝတ်ပြီး သွားချင်တဲ့ နေရာသွားလို့ရပါပြီ…. ညအိပ်တဲ့ အထိ မချွတ်ရဘူးနော်…. ပြီး ဒါ လျို့ဝှတ်… ပေါက်ကြားလို့ကတော့ တစ်ရုံးလုံး ထောင်ထဲရောက်မှာ….. သွား လှဲဝတ်ကျ…..
ဘယ်ယောက်ျားမှ မရှိဘူး….. ခုလှဲဝတ်…. မှတ်တမ်းယူပြီး ပြန်တင်ပြရမှာ…. လုပ်မြန်မြန်လှဲ…..
မိန်းမသားအားလုံး အဝတ်တွေချွတ်ကာ နေကြာပန်းဝတ်စုံများ လှဲဝတ်ကျလေသည်…..
အားလုံးပြီးသွားတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြန်သွားကျလေသည်….
ဝိုင်းလေးမှာ နေကြာပန်းဝတ်စုံ အဖြူရောင်ဖြင့် ဆိုင်ကယ်ထားသည့်နေရာကိုရောက်နေသည့်တိုင်…. မြတ်မြတ်ကို ရှာမတွေ့သေး….. ဒါကြောင့် မြတ်မြတ်ဆီ ဖုန်းဆက်သောအခါ…. မြတ်မြတ်မှ…..
ဝိုင်းလေး…. ငါဒီနေ့ လူကြီးလမ်းကြောင်းနဲ့ လိုက်ရမှာတဲ့…. ငါပြန်လာခါနီး ဖုန်ကြိုဆက်မယ်….. ပြန်နှင့်တော့….
ဝိုင်းလေးမှာ မြတ်မြတ်နဲ့ ဖုန်းပြောပြီး သူ့ဘဲ ကိုဖြိုးဆီဆက်တော့ ကိုဖြိုးက…..
ကိုရေခမ်းနေတယ်…. ဟိုတယ် အကုန်လုံးလဲ ဘွတ်ကင်ပြည့်နေတာ မရဘူး….
ဟွန်း…. ပြောလိုက်ရင်…. အားကို မကိုးရဘူး…. အဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ်… ကိုကို မိန်းကလေးပုံစံလုပ်ထား…. ချစ်တို့ အခန်းမှာ ချစ်တစ်ယောက်တည်း…. လိုက်ရဲလား….
မိန်းကလေးပုံစံတော့ လုပ်ထားနော်…. Ocean ရှေ့ကစောင့်…. ချစ်ဝင်ခေါ်မယ်…..
Ocean ရှေ့တွင် ကိုဖြိုးမှာ မိန်းကလေးပုံစံနီးပါး ဂျင်းဘောင်းဘီအရှည်…ရှပ်အကျီးအပွလက်ရှည်နှင့် ဦးထုပ်တစ်လုံးဆောင်းကာ ဝိုင်းမို့မို့အား စောင့်နေလေသည်…. ကိုဖြိုးနှင့် ဝိုင်းလေးတို့မှာ ချစ်သူဖြစ်တာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း…. ကိုဖြိုးမှာ ဝိုင်းမို့မို့အောင်ကို ငါးကြိမ်သာ ဖင်ထောင်လိုးခွဲရသေးသည်…. ဝိုင်းလေးရဲ့ ရာထူးဂုဏ်မက်မောမှုကြောင့်…. ကိုဖြိုးလိုးချင်တိုင်း လိုးမရ….. အောက်ဆုံးအဆင့် ဝန်ထမ်းဖြစ်သော်လည်း ညွှန်မှူး ကတော်နီးပါး သွေးတတ်သော ဝိုင်းမို့မို့အောင်မှာ…. ဟိုတယ်က လွဲရင်…. မည်သည့်နေရာမှ…. မကုန်း….. ကိုဖြိုး လိုးချင်ရင် ဟိုတယ်ခ လိုက်ရှာပေတော့ပဲ…. ကြာတော့ ကိုဖြိုးမှာ ဝိုင်းလေးကို ချစ်တဲ့အချစ်က တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာကာ ယုတ်မာဖို့ ဖြစ်လာသည်…….ဒီနေ့ လပြည်နေ့တွင် ဝိုင်းလေးကို လိုးဖို့ ဟိုတယ်ခကို အရင်တစ်ပတ်ထဲက ကျစ်ကုတ်စုထားခဲ့သည်… မနေ့ညက ဟိုတယ် ဘိုတင်လိုက်တင်ရာ… တစ်ခန်းမှမရ…. ဟိုတယ်မှ မဟုတ်ရင်… ဝိုင်းလေးက မခံဆိုတော့… ကိုဖြိုး စိတ်တိုစွာဖြင့်…..ယုတ်မာစွာ ကြံစည်ထားသည်မှာ….. ဝိုင်းလေး လူစည်တဲ့ နေရာခေါ်သွား…. သူ့နောက်ကနေ…. သူဖင်ကို လီးနဲ့ထောက်ပေးပြီး…. လူကျပ်လို့ မောလာတဲ့အချိန်… ဆေးအသင့်ခပ်ထားတဲ့ ရေဗူးတိုက်…. ဆေးရိုန်ကြောင့် မခံရမနေနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှ…. လယ်ဝေးထိ ခေါ်သွားပြီး…. ဖုန်းဆိုင်ထဲမှာ ဖင်ပါကင်ဖွင့်… အားရအောင် လိုးပြီးမှ ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေပါ ခေါ်ပြီး လိုးခိုင်းပစ်မယ်ဆိုပြီး…. ကြံစည်ကာ….ဟိုတယ်ခကို ဆေးဆိုင်ပြေးသွား ဖိးလ်ဆေးပဲ ဝယ်ထားလိုက်တော့တယ်……အဲလို့ ယုတ်မာစွာကြံစည်ထားလို့များကြောင့်လား….. ခုနက ဝိုင်းလေးမှ ဖုန်းဆက်ပြီး…. သူ့အခန်းမှာ အသာတကြည်ကုန်းမည် ဆိုတော့…. ကိုဖြိုး စိတ်ကျေနပ်သွားပေမယ့်….. ညတုံးက အဆင်သင့်လုပ်ထားတဲ့ 0.6 လီတာ ရေသန့်ဗူးလေးကိုတော့ ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့်ကာ ယူလာခဲ့လေသည်….. ကိုဖြိုး စောင့်နေတာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Kenbo 125 ဘီးလေးနဲ့ ဝိုင်းလေး လာနေသည်ကို လှမ်းမြင်နေရသည်…. ဆိုင်ကယ် ဦးထုပ်ဆောင်းထားပြီး နေကြာပန်း ဝမ်းဆက် အဖြူရောင်လေးနဲ့ ဝိုင်းလေးမှာ ကိုဖြိုးရှေ့ ဆိုင်ကယ်ထိုးရပ်လိုက်ပြီး….
ဟင်… ကိုကို မမောင်းဘူးလား…..
ချစ်ကလဲ…. ကိုကိုက ခုချိန် မိန်းကလေးရေ…. ဟောဒီက မမဝိုင်းမို့ရဲ့ အဆောင်ကို လိုက်လည်တာကိုး… မမဝိုင်းက ရှေ့က မောင်းရမှာပေါ့…..
ဟွန်း…. မသိရင် ခက်မယ်…. တတ်…..
ကိုဖြိုးမှာ ဝိုင်းလေးရဲ့နောက်ကနေ ကားယားခွတတ်ထိုင်လိုက်ပြီး…. နေကြာဝမ်းဆက်အဖြူရဲ့ အပေါ်အကျီရင်ဖုံးခါးတိုနဲ့ အောက်က ထမိန်နဲ့ကြား ဟနေတဲ့နေရာက ဝိုင်းလေးရဲ့ ခါးအသားလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အုပ်ကိုင်လိုက်ကာ…. ဆိုင်ကယ်ခုံပေါ်တွင် ပုံကျနေတဲ့ အဖြူရောင်ထမိန်ဖုံးထားတဲ့ ကျစ်လစ်တောင်းတင်းပြီး ဘစ်လိုင်းရာလေးပြေးနေတဲ့ ဝိုင်းလေးဖင်ကို ကိုဖြိုးမှာ သူ့လီးနဲ့ သေချာနေရာချတာ ထောက်လိုက်သည်…..
အူးယားလို့ ကိုရေ…. တခါတည်း ထိုးထည့်ထားပါ့လား… ဟိုရောက်ရင် ပေးပါမယ်ဆိုတာတောင် မစောင့်နိုင်ဘူး….ဟွန့်…..
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဆိုင်ကယ်စက်နိုးကာ မောင်းထွတ်သွားလေသည်…..
ကိုဖြိုးမှာ နောက်ကနေ ဝိုင်းလေးဖင်ကို အတင်းဖိထောက်ထားရင်း လိုက်လာလေသည်…..
ဝိုင်းလေးတို့အဆောင်ကိုရောက်တော့… ဝိုင်းလေးက ရုပ်မပျက်စေရန်ပြောပြီး ရှေ့ကခေါ်သွားလေသည်…
ကိုဖြိုးမှာ ဝိုင်းလေးနောက်က လိုက်ရင်း အခန်းတွေကို အကဲခက်ကြည့်ရာ…. အားလုံးနီးပါးပိတ်ထားကျလေသည်…. နေပြည်တော် ဌာနအသီးသီးက အပျိုကြီးဝန်ထမ်းတွေနေတဲ့ အဆောင်ဆိုတာ ကိုဖြိုး သတိပြန်ဝင်လာပြီး လီးမှာ တင်းတောင်းလာလေသည်…. ကြည့်ဦးလေ…. ဘစ်တွေရော…. ဘာယာတွေရော…. ထမိန်တွေရော…. ရောင်စုံတွေ့နေရပြီး….ရှေ့က ဖင်ပစ်ပြီးလျှောက်သွားတဲ့ ဝိုင်းလေးဖင်တုန်တွေမှာလဲ နေကြာပန်းထမိန်အောက်မှာ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့…. အခန်းတစ်ခုရှေ့ရောက်တော့…. ဝိုင်းလေးရပ်လိုက်ပြီး သော့ဖွင့်ကာဝင်လိုက်ပြီး ကိုဖြိုးကို တံခါးဟပေးထားသည်……ကိုဖြိုး အလိုက်သင့်အခန်းထဲ ဝင်လိုက်ပြီးနောက်….ိုင်းလေးမှာ တံခါးမှ ခေါင်းပြူးကာ လမ်းတစ်လျောက်ကို အကဲခက်ပြီး တံခါးပြန်ပိတ် ချက်ချကာ…အခန်းဘက်ပြန်လှည့်လိုက်စဉ်……ကိုဖြိုးမှ ဆက်ကနဲ့ဖြင့် ဝိုင်းလေးကို နံရံဘက်တွန်းကပ်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်း တရွတ်ရွတ်နဲ့ နမ်းနေတော့သည်….
ဝိုင်းလေးမှာ ကိုဖြိုးကျောပြင်ကို ပြန်ဖက်ကာ…. ကိုဖြိုးလွယ်ထားတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ချွတ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လွတ်ပစ်လိုက်သလို…. သူ့လက်က ဆလင်းဘက်အိတ်ကို ပစ်ချလိုက်သည်…. ပြီး ကိုဖြိုးရဲ့ ရှပ်အကျီအပွအောက်ကနေ လက်လျိုထည့်ကာ ကျောပြင်အား ကုတ်ခြစ်ပြီး ကိုဖြိုး လျှာနှင့်အပြိုင်…. သူ့လျှာကိုသုံးကာ အားကျမခံ ရစ်ပတ်စုတ်ယူ နေသည်……။
မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ… တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် ထိုသူတွေအကြောင်းကို ဒဲ့ရေးခြင်းသာဖြစ်သည်)
ကိုဖြိုးမှလဲ ဝိုင်းလေးကိုနံရံဖိကပ်ရင်း နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေသလို…. ရင်ဖုံးအကျီအဖြူပေါ်က နို့ကြီးတွေ ဖျစ်ညစ်နေသည်….. နေကြာပန်း ရင်ဖုံအကျီးလေး တွန်ကျေတဲ့အထိ….ဖျစ်ညစ်ပြီးမှ…. အကျီရဲ့ နှိပ်စေ့များကို တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ဆွဲခွာလိုက်သည်….. ရင်ဘက်ပွင့်သွားတဲ့ ဝိုင်းလေးရဲ့ ရင်ဘက်မှာ… အသားရောင် ဘာယာစီရာက ကြီးမားတဲ့ နို့ကြီးတွေကို ကျစ်လစ်နေအောင် စုစည်းထားပြီး ထုပ်ပိုးထားတယ်…. ကိုဖြိုးက တစ်ဆက်တည်း ဘာယာစီရာကို နို့တွေအပေါ် တွန်းကာ လိပ်တင်ပစ်တော့….. လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခုန်ထွတ်လာတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံး…. ကိုဖြိုးမှာ နို့တွေကို ပွတ်လိုက်…. ခါးတွေကို ပွတ်လိုက်နဲ့…. လက်ကို အငြိမ်မပေးပဲ ဝိုင်းလေး ရင်ဘက်ပေါ် ဆက်တိုက် လှုပ်ရှားနေရာမှ….. သူတို့နှစ်ယောက်နားက အင်ဗာတာ တင်သည့် စင်ပေါ်ကို ဝိုင်းလေးရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကို မတင်လိုက်သည်….. ထိုနောက် ကိုဖြိုးသည် ဝိုင်းလေးကို အနမ်း အလျက် အပွတ်များ မပြတ်စေပဲ…. ခုံပေါ်တင်ထားတဲ့ ဝိုင်းလေးခြေသလုံးကို ဖမ်းသုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး…. ထမိန်အောက် လက်လျိုကာ ခြေထောက်တစ်ချောင်းလုံး ပွတ်သပ်ပြီး ပေါင်ကြားထဲက ဝိုင်းလေးရဲ့ သောက်ဖုတ်ကို သူရဲ့ ဘစ်ပေါ်ကနေအုပ်ကိုင်လိုက်သည်…… နေကြာပန်းအဂါရောင်များနဲ့ အဖြူစွတ်စွတ်ထမိန်မှာ ဝိုင်းလေးရဲ့ ပေါင်တစ်ခြမ်းကို ဖုံးပေးမထားနိုင်တော့….. စွတ်စို စိုရွဲနေတဲ့ ဝိုင်းလေးအောက်ခံဘောင်းဘီအနီးရောင်လေးပေါ်ကနေ…. သောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ပေးနေရင်းက…. အောက်ခံဘောက်ဘီကို ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်…. ညာဘက်ခြေသလုံးထိရှိနေသေးတဲ့ နေကြာပန်းများနဲ့ ထမိန်ဖြူစအောက်က ခြေကျင်းဝတ်မှာတော့ အရည်တွေ စွဲနှစ်နေတဲ့ အနီရောင် ဘစ်တစ်ထည်ပေါ့်……ကိုဖြိုးရဲ့လက်ချောင်းတွေက ဝိုင်းလေးရဲ့ သောက်ဖုတ်ကို အပီအပြင် နေရာဝင်ယူကာ အဆက်မပျက် ကလိနေတော့… သိပ်မကြာခင်မှာပဲ….. ဝိုင်းလေးမှ ရုတ်တရက် ကိုဖြိုး ရင်ဘက်ကို ဆောင့်တွန်းချပစ်သည်….. ဝိုင်းလေး ကိုဖြိုးပုခုံးနှစ်ဘက်ပေါ်လက်တင်ကာ ကိုဖြိုးမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး….. မောဟိုက်နေစွာဖြင့်…..
ကိုကို….ချစ်မနေနိုင်တော့ဘူး……. ကိုကို ဟိုကုတင်ပေါ်မှာ ပတ်လက်လှန်လိုက်….
ကိုဖြိုး နောက်လှည့်၍ ဝိုင်းလေးပြသည့်နေရာကို ငြည့်လိုက်တော့…..လိုက်ကာတစ်ခုတင်ထားတဲ့ ကြိုးတန်းရဲ့ နောက်မှာ နှစ်ယောက်အိပ် စတီးကုတင် တစ်လုံး…. ကုတင်ပေါ်မှာ အဝါရောင် အိပ်ရာခင်းဖုံးထားတဲ့ ခြောက်လက်မ အထူ မွေယာ…. ကိုဖြိုး တစ်ခုခုကို ဘဝင်မကျပေမယ့် ဝိုင်းလေးက ကုတင်ဆီကို တွန်းထိုးပို့နေသောကြောင့် သိပ်စဉ်းစားမနေပဲ… ကုတင်ပေါ်တွင်ပတ်လက်လှန်ပေးလိုက်သည်…..။
ပတ်လပ်ဖြစ်သည်နှင့် ကိုဖြိုးကိုယ်ပေါ်ရှိ အဝတ်များအားလုံးကို အမြန်ဆွဲချွတ်နေတဲ့ ဝိုင်းလေးရဲ့ ပုံစံမှာ အရူးတစ်ယောက်ပမာပင်…..ဘေးက လိုက်ကာစကိုလဲ ဆွဲချလိုက်သည်…..။
ကိုဖြိုး ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားချိန်တွင်တော့…. ဝိုင်းလေးမှာ ကိုဖြိုးပေါင်နှစ်ချောင်းကို ခွရပ်ကာ…. ထမိန်ကို ခါးဆီကို လိပ်တင်ပြီး ထောင်မတ်နေတဲ့ ကိုဖြိုးလီးတည့်တည့်ကို တဖြည်းဖြည်းထိုင်ချလာသည်……. လီးနားရောက်တော့ ထမိန်ကို လက်တစ်ဖက်ကစုကိုင်ပြီး တစ်ဖက်က ကိုဖြိုးလီးကို ကိုင်ကာ သူ့သောက်ဖုတ်အပေါက်နဲ့တည့်အောင်တေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချနေသည်…..။ အောက်က ကိုဖြိုးမှာ ညစ်ချင်တာနဲ့ ဖိးလ်ခံပြီး လီးပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချနေတဲ့ ဝိုင်းလေးကို ခါးအားစုံကိုင်ကာ အောက်ကနေ အားနဲ့ ပင့်ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်…..။
ဗြစ်…. တုတ်… အ…..ဘုတ်……
ဝိုင်းလေး မျက်လုံးပြူးသွားသည်…. ကိုဖြိုးမှာ လီးကို သောက်ဖုတ်ထဲ စိမ်ထားရင်း…. နေကြာရင်ဖုံ အဖြူလေးရဲ့ ဟနေတဲ့ ရင်ဘက်ပေါ်က ဝိုင်းလေးနို့တွေကို အောက်ကနေ့ ပင့်လိုက် ပွတ်လိုက် လုပ်နေသည်….. ဝိုင်းလေးမှာ ကိုဖြိုးကို အံကြိတ်ကာ စိတ်ဆိုးသည့်အမူအရာလုပ်ပြကာ…. ကိုဖြိုး ရင်ဘက်ပေါ်ကို လက်နှစ်ဘက်ထောက်လိုက်သည်….. ကုန်းထောက်လိုက်သည့် ပုံစံမို့ နို့တွေက ကိုဖြိုးနဲ့ပိုနီးကပ်သွားသော်လည်း…. ကိုဖြိုးလက်တွေက ဒီတခါ နို့တွေပေါ် မဟုတ်တော့ပေါ်…… ဝိုင်းလေးရဲ့ နောက်က ဖင်တုံးကြီးတွေပေါ်ရောက်နေသည်…. ထမိန်ကို ခါးထိတွန်းတင်လိုက်ပြီး…. ပြောင်လက်နေတဲ့ ဖင်တွေကို လက်ဝါးနဲ့ အားရပါးရ တခြမ်းကို တချက်စီရိုက်ပစ်သည်….
အ… ကနဲ့ အော်သံနှင့်အတူ ဝိုင်းလေးမှာ အံကြိတ်ပြီး တဖြောင်းဖြောင်းဖြင့် ဆောင့်ချပြီး လိုးပါတော့သည်…. ဝိုင်းလေးရဲ့ ဆောင့်ချလိုးနေပုံက….. ဆံပင်တွေက ဖရိုဖရဲ…. မျက်နှာမှာ အပေါ်မော့ပြီး…မျက်လုံးမှိတ်….ပါးစပ်ဟ….. အပေါ်အောက် စည်းချက်ညီညီ လှုပ်နေတဲ့ နိ့ကြီးနှစ်လုံး….. သေချာချည်နှောင်မထားတဲ့ နေကြာပန်း အဖြူရောင်ဝမ်းဆက်က ရင်ဖုံးအကျီက ရင်ပွင့်ကာ လှုပ်ရမ်းနေသလို…. နေကြာပန်းအဝါတွေနဲ့ ထမိန်ဖြူကလဲ ဝိုင်းလေးခါးမှာ ကွင်းအဖြစ် ဆောင့်ချက်နဲ့အတူ လွင့်ပါနေသည်….. ကိုဖြိုး အောက်ကို ငုံ့ကြည့်တော့…. ဝိုင်းလေးရဲ့ သောက်မွှေးနှနှလေးတွေမှာ အဖြူစက်ကလေးတွေ အများအပြား ကပ်သီနေသည်… အမွှေးတွေနောက်က ဝိုဂ်းလေးသောက်ဖုတ်မှာ ပန်းရောင်သန်းနေသလို စိုရွဲကာ နူးအိနေပြီး…. ကိုဖြိုးလီးကို တဆုံးဝင် တဆုံးထွတ် ဆောင်ချနေတာကြောင့်… အာသွားလိုက် စုသွားလိုက်နှင့်….. သောက်ဖုတ်အပေါ်ရောက်နေချိန်…. ကိုဖြိုးလီးကြီးမှာဆိုလည်း…. အကြောတွေ ထောင်ထနေသည်မှာ အရိုးတွေအလား…. လီးတစ်ချောင်းလုံးလဲ…. အဖြူရောင် သောက်ရည်များနှင့်….ပေကျံနေသည်……..
အသက်အောင့်ကာ အသေအလှဲ ဆောင့်ချရင်း…. ကိုဖြိုး ရင်ဘက်တွေကို ကုပ်ခြစ်ကာ…. တအအနဲ့ အော်ပြီး ဝိုင်းလေး ကိုဖြိုးပေါ် မှောက်ချတာ…. သူလိုချင်တဲ့ အရာကို ရရှိသွားလေသည်…..
ကိုဖြိုးမှ ဝိုင်းလေးကျောကို ပွတ်သပ်ရင်း…..
ချစ်…. ကိုကို မပြီးသေးဘူးနော်…..
ချစ်…. သိပါတယ်… ကိုကိုရယ်…. သုံးမိနစ်ပဲစောင့်…. ချစ် အမောဖြေပါရစေနော်…. ပြီးရင် ကိုကို စိတ်ကြိုက် လိုး….။
( )ဦးစီးဌာနရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲတွင်……တသ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာပေါ်တွင် ညွှန်မှူး ဦးသိန်းမောင် ထိုင်နေပြီး သူ့ရှေ့တွင်….
သနပ်ခါးရောင် နေကြာပန်း ဝမ်းဆက်နှင့် လက်ညွှန် ဒေါက်တာ ရီရီမိုးက ဒူးတုတ်ကာ ညွှန်မှူး လီးကို သေချာစုတ်ပေးနေသည်….
သူတို့ရှေ့တည့်တည့်…. နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာပေါ်တွင်တော့….. ပန်းရောင် နေကြာပန်းဝမ်းဆက်နှင့် ရုံးအုပ်ကြီး အေးမြတ်မွန်….သူ့ဘေးတွင် အဖြူရင်ဖုံးအကျီ အပြာရောင် ချိတ်ထမိန်နဲ့ ရုံအုပ်ကြီး စိုးမြတ်မြင့်ဦး……
ဘေးက တစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာ နှစ်လုံးတွင်…… အပြာနုရောင် နေကြာဝမ်းဆက်နှင့် ယနေ့ တာဝန်မှူး ၁. စိုးစိုးလင်း နှင့် အဝါရောင် နေကြာဝမ်းဆက်နှင့် တာဝန်မှူး ၂. ချိုချိုအောင်…. တို့ အသီးသီးထိုင်နေကြသည်……
ညွှန်မှူးက ရီရီမိုး ဆံပင်တွေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး ကိုယ်ကို မတ်လိုက်ကာ….
ကဲ…. အငယ်တွေကပဲ စပြောတော့မယ်…… သမီး ချိုချိုအောင်က ဒီနေ့တော့ ဘယ်မှမသွားပဲ ရုံးရဲ့ တာဝန်မှူးအဖြစ် ဒီမှာပဲ နေခဲ့တော့….. ဟိုနေ့က အခွန်ရုံးဖြစ်ထားတဲ့အတွက် နောက်နေ့မနက် တာဝန်မှူးလာမှပဲ အဆောင်ပြန်ရမယ်…သမီးကို အဲလိုစောင့်ပေးတဲ့အတွက် အဘက မုန့်ဖိုးပေးပါ့မယ်…. ရှင်းလား…. ချိုချို…..
ဟုတ်ကဲ့…. ရှင်းပါတယ်….အဘ….ဟိုလေ….သမီးတစ်ယောက်တည်း ညအိပ်ရမှာဆိုတော့ သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လောက်ခေါ်အိပ်လို့ရမလား….အဘ…..
မမေးတော့ပါဘူး…. ငါ့တို့ထွတ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ လှမ်းခေါ်လို့ရတယ်….. ချိုချို….ငါ့ခုံတွေတော့ မကျိုးစေနဲ့နော်…..
ဟုတ်…. အဲ….. ဟာ အဘကလဲ…..
ပြီး စိုးစိုး….သမီးကတော့ အဘတို့ အဖွဲ့နဲ့လိုက်ခဲ့…..ညည်းကိုတော့ မုန့်ဖိုးမပေးတော့ဘူး…. အခွင့်ရေးပဲ ပေးမယ်…. သမီး အမ မွန်မွန်လို အရည်ချင်းရှိရင်… သမီးကို စောင့်ရှောက်မယ့် အဘတစ်ယောက် ဒီည ပေါ်လာလိမ့်မယ်….
ဟုတ်ကဲ့ပါ အဘ….ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဘ….
ထုံးစံအတိုင်း…. အဘနဲ့ အတူတူပေါ့… ဟိုရောက်ရင်…. စိုးစိုးကို ဖြစ်နိုင်မယ့်သူနဲ့ ချိတ်ပေးလိုက် မွန်မွန်ကတော့…. သမီးက အဘ ဘော်ဒါတွေရဲ့ အကြိုက်ကို နိုက်နိုက်ချွတ်ချွတ် သိတဲ့သူဆိုတော့…. စိုးစိုးက ဘယ်သူအကြိုက်လဲဆိုတာ သိမှာပါ….
ရီရီမိုးနဲ့ မြတ်မြတ်….. အဓိကမှာချင်တယ်….. ခု အဘက ဒီနေ့ နေပြည်တော်မှာ အားရက်တစ်ရက်အဖြစ် လာနားကျမယ့်…..အဘရဲ့ တပ်ထဲက ညီအကို ဆရာတပည်တွေ စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက် အဘဆီက သမီးတွေနဲ့အတူ သွားပြုစုရမယ်….ရီရီတို့ ဆရာ တပည့်နှစ်ယောက်ကတော့….. အဘရဲ့ ဆရာကို သွားပြုစုပေးရမယ်……လိပ်စာပေးလိုက်မယ်…. အဲ့ကို နှစ်ယောက်တည်းသွား…. ခြံဝရောက်ရင် အဘက လက်ဆောင်ပေးခိုင်းလို့ လာပို့တာလို့ပြောလိုက်….အဘဆရာဆီလိုက်ပို့လိမ့်မယ်….. ဆရာက မြတ်မြတ်ကို တွေ့ပြီး သဘောကျလို့….. အဘ ဆရာကို သေချာလေးပြုစုပေးလိုက်…. သမီးအတွက် အကျိုးလုံးဝ ရှိစေရမယ်လို့ အဘ အာမခံတယ်…. ရီရီကတော့ ဆရာ့ pso ကို လိုချင်တာလေးပေးလိုက်ပေါ့….. နှစ်ယောက်စလုံး ဒီပုံစံနဲ့သွားနော်…. ဆရာက မြတ်မြတ် ယူနီဖောင်းလေး ကြည့်ကောင်းတယ်လို့ ပြောဖူးလို့…..
ညွှန်မှူးမှာ အိပ်ကပ်ထဲက စာရွက်တစ်ရွက်ထုတ်ပြီး ရီရီမိုးကိုပေးလိုက်သည်… အဲ့မှာ နာမည် လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်…..ငါ့ကားယူသွား…… သွားတော့……ကံကောင်းပါစေ….. မြတ်မြတ်…..
ရီရီမိုးနှင့် မြတ်မြတ်ထွတ်သွားပြီး ငါးမိနစ်ကျော်လောက်တွင် ညွန်မှူးတို့ အုပ်စုလဲ ထွတ်သွားရာ….ရုံးတွင် ချိုချိုအောင်တစ်ယောက်တည်းသာ ကျန်ခဲ့လေတော့သည်….။
ချိုချိုအောင်လဲ အဘရုံးခန်းထဲဝင်ကာ အဘနဲ့ မွန်မွန်တို့ တမနက်လုံး လိုးဆော်ထားတဲ့ လရည်တွေ သောက်ရည်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်…. အရေးထဲ မြတ်မြတ်က သောက်ဖုတ် အမွှေးမရိတ်ရသေးလို့ ရိတ်ပေးရသေး…..အင်း မြတ်မြတ်သောက်ဖုတ်တော့ ဒီညလီးတစ်ချောင်းတင်မကလောက်ဘူး…. အဘ ဆရာပြီးရင်….pso က တတ်ချဦးမယ်….. ဒီလိုပါပဲ… ချိုချိုအောင်လဲ ဘာထူးလဲ….. အနေစားချောင်ကာ အဘနားကပ်နေရဖို့အတွက် ဟို ဦးစီးအရာရှိဆိုသူနဲ့ ငွေဆောင်တစ်ပတ်သွားလိုက်ရသေးတာပဲ….. ဆရာက နောက်ဆုံး နှစ်ရက်မှာ ဖင်ချည်းချလို့ ငွေဆောင်ကအပြန် တစ်ပတ်လောက်က အိမ်သာတတ်ရမှာကို လန့်တဲ့အထိပဲ……ချိုချိုအောင် အားလုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးသွားတော့…. ထုံးစံအတိုင်း သောက်ဖုတ်က ရွတတ်လာတော့….. မွေးစားမောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ခေါ်မယ်ဆိုပြီး ကြံစည်နေသည်….. လုပ်စရာရှိတာ အားလုံးပြီးအောင်အရင်လုပ်ပြီး ဗိုက်ဆာလာသည်နှင့် မုန့်မှာစားရန် အဘမုန့်ဖိုးပေးသွားတဲ့ စာအိတ်ကို ဖောက်ကာ တစ်သောင်းတန်များကို ရေတွက်နေစဉ်…. ဖုန်းဝင်လာ၍ ကြည့်လိုက်တော့ ရမည်းသင်းဘက်က ရဲထဲဝင်သွားတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း ဇော်အောင်ဖြစ်နေ၍ ကောက်ကိုင်လိုက်သည်…..
ငါပြောတာ ဂရုစိုက်နားထောင်နော်…. ဒီနေ့ ငါ့တို့စခန်းက သတင်းရလို့ လိုက်ဖမ်းတာ…. ငါးယောက်ဖမ်းမိတယ်….အဲ့ထဲက ပြည့်စုံဆိုတဲ့ ကောင်လေး
ဖုန်းကို စစ်ကြည့်တော့ နင့်ဖုန်းကနေ တစ်ပတ်ကို တစ်သောင်း အနည်းဆုံးလွဲထားတာတွေ့နေရတော့…. နင့်နောက်ကို လိုက်နေကျပြီး…. နင်နဲ့ ဘယ်လို ပတ်သက်နေလဲ….ဘာပဖြစ်ဖြစ် လွတ်အောင် ပုန်းတော့ဟာ…. ငါ့ကို မတွေ့စေနဲ့….ဒါပဲနော်…
ဇော်အောင် ဖုန်းချသွားတော့ ချိုချို ငူငူကြီး ရပ်ကျန်နေခဲ့သည်….ပြည်စုံဆိုတာ….သူ့မွေးစားမောင်လေး… သူ့လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ အချိန်မရွေး ဖြည့်စည်းပေးနေတဲ့သူ…. ဒါကြောင့်လဲ ပြည့်စုံမုန့်ဖိုးတောင်းတိုင်း အမြဲလွဲပေးနေကျ…. ခု အဲဒါကြောင့်…ချိုချို ဆက်မတွေးရဲ…. ဘာလုပ်ရမည် မသိ ဖြစ်နေစဉ်….. ဖုန်းဝင်လာပြန်၍ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်ကြည့်ရာ…. မအေးမြတ်မွန်ရဲ့ ဖုန်း….
ဟုတ်….ကြားပြီးပါပြီ…. မမ…ညီမလေးကို ကယ်ပါဦး….ညီမလေး တကယ် မသိပါဘူး….ကယ်ပါဦး မမရယ်……
အင်း….အဲဒါ မမလှမ်းပြောတာ ချိုချို…..အဘက ညီမကို စောင့်ရှောက်ထားမယ်တဲ့….လက်ခံမလားတဲ့…
အေးအေး အဲဒါဆို နောက်သုံးမိနစ်လောက်ကျရင် ရုံးကို လူတစ်ယောက်လာလိမ့်မယ်…. တံခါးခေါက်တဲ့အချိန် ဘယ်သူလဲလို့မေး….. ခင်မာချို ယောကျာ်းပါဆိုမှ ဖွင့်ပေးလိုက်….. အဲ့လူနဲ့စကားပြောကြာ့်လိုက်တဲ့ အဘက မှာတယ်…..
အေးပါ….ခင်မာချိုယောကျာ်းနော်……သေချာမှတ်ထားဦး…..ပြီး….. ညီမလေးဖုန်းကို ပိတ်ထားလိုက်တော့နော်……
ဖုန်းချပြီးသည်နှင့် ချိုချိုအောင် သူ့ဖုန်းကို စက်ပိတ်လိုက်တော့သည်…. ပြီး ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့် ဘုရားစာများ ရွတ်နေစဉ်…..
ချိုချိုအောင်….အပြေးအလွှား တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ တံခါးဝတွင် ဗိုက်ပူ….အသားမဲမဲ….ကွမ်းယာ ပလုံပထွေးနဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့ရသည်….လူကြီးမှ…..
ကျနော်ကို အဘက ဖုန်းဆက်ပြီး ဒီကိုလွတ်လိုက်လို့ပါ….
ချိုချိုအောင် အခန်းတံခါးကို သေချာပိတ်ပြီး လူကြီးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်စဉ်….လူကြီးမှ…..
ကဲ ညီမ အချိန်က အရမ်းအရေးကြီးတော့ တိုတိုပဲပြောတော့မယ်…… ခုနက အဘဖုန်းဆက် ညွှန်ကြားတာကတော့ ညီမကို ဦး ရဲ့ သမီး ချိုချိုဝင်း မှတ်ပုံတင်ပေးကိုင်ပြီး နှစ်ရက်လောက် ဝှတ်ပေးထားပို့ ညွှန်ကြားတယ်….. အဲဒါ ညီမ ဦး သမီး ချိုချိုဝင်း အနေနဲ့ လိုက်ခဲ့မလား…..
ချိုချိုအောင် ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ပဲ…..
အိုကေ.. ကဲ သွားမယ်….လာ…..
ချိုချိုအောင်သည် အမည်မသိတဲ့ လူကြီးရဲ့ကားပေါ်တွင် ရောက်နေပြီး ကားမှာ ပျဉ်းမနားဘက်ကို ဥိ်းတည်ကာ…. မောင်းနေလေသည်….. လမ်းတွင်…လူကြီးမှ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို ချိုချိုအောင်အား ပေးလေရာ…. အမည်က ချိုချိုဝင်း….အဖအမည်မှာ ဦးအောင်ဝင်း…..
မဟုတ်ဘူး…. ဦးက ပျဉ်းမနားက (-) ဟိုတယ် ပိုင်ရှင် ဦးမင်းကြိုင်…. ချိုချိုဝင်း ဆိုတာ မွေးသားသမီးကြေငြာပြီး ဦးရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းမယား…. ခုတော့ ဦး ဟိုတယ်မှာပဲ ဦးမရှိတုန်း ဦးရဲ့ရန်ဘက်အုပ်စုက ယောကျာ်းသား ခြောက်ယောက်က ဝန်းပြီး မုဒိန်းကျင့်တာ စအိုကွဲ… သားအိမ်ကွဲ….သွေးထွတ်လွန်ပြီး ဆုံးသွားပြီး……
ရှင်….အဲဒါဆို….ခု သမီးက ဦးရဲ့…….
သမီး သဘောပါ….ချိုချို…. ဦး အတင်းကြပ်ကြီးမလုပ်ပါဘူး…..အဘက နှစ်ရက်လောက်ဝှတ်ထားဆိုတော့…. သမီးက ချိုချိုဝင်း နာမည်နဲ့ ဦးရဲ့ ဟိုတယ်မှာ ဧည်သည်အဖြစ် နှစ်ရက်တည်းပေါ့်…. အစားအသောက် ဦးတာဝန်ယူပေးပါမယ်…. နှစ်ရက်ကျော်ရင်တော့ သမီးအစီအစဉ်အတိုင်း စိတ်ကြိုက်လုပ်ပေါ့….. တကယ်လို့ ဦးရဲ့ ချိုချိုဝင်းအဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့…. အဲ့ဟိုတယ်က ခု သမီးကိုင်ထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်နဲ့ အမည်ပေါက်ထားတာဆိုတော့….သမီးကြိုက်တာရွေးပါ….. ဟိုတယ်ရောက်ရင်တော့ ဧည်သည်ဖြစ်နေသေးတဲ့ အတွက် ရီစက်ရှင်ကို မှတ်ပုံတင်အပ်ရမှာပေါ့…. တကယ်လို့ ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ချိုချိုဝင်းရဲ့ master room ကို ရင်ကော့လျောက်ဝင်သွားရုံပဲ……စကားတပြောပြောနဲ့ မောင်းလာရင်း…. လေးထပ်အမြင့်ရှိတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုရှေ့သို ကားထိုးရပ်လိုက်သည်…..
ကဲ သမီး….မှတ်ပုံတင်က အပ်မလား….သမီးကိုင်ထားမလား…. ဟိုတယ်ရှေ့တွင် နေကြာပန်းများဖြင့် ဝင်တဲ့သူတွေ ထွတ်လာတဲ့သူတွေကို ကြည့်ရင်း…. ချိုချိုအောင်က……
ဦး…..ချိုရဲ့ master room မှာ အေးဆေးနားချင်တယ်……
ဟုတ်ပါပြီး ချိုရယ်….ဒါမယ့် ချိုက ဦးရဲ့…….
ပြောပြီး ဦးမင်းကြိုင် ပုခုံးပေါ် မေးတင်ကာ…. လက်က ဦးမင်းကြိုင်ရဲ့ ပုဆိုးပေါ်ကနေ… လီးကို အုပ်ကိုင်ကာ စုတ်နယ်ပေးနေသည်……
ဦးမင်းကြိုင် ဖုန်းထုတ်ကာ ဆက်လိုက်ပြီး…..
ခုချက်ချင်း master room သွားမယ်….. အဆဂ့်သင့်လုပ်ပါ…..
ဖုန်းချပြီးတာနဲ့…. ကားကို စက်ပြန်နိုးကာ ဟိုတယ်ဘေးက ကားဝင်ပေါက်ကို မောင်းချသွားပြီး….. ဟိုတယ်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးအထပ်ထိ မောင်းချသွားလေသည်……။
master room ထဲကို ချိုချို ရှေ့မှဝင်သွားပြီးနောက်မှ ဦးမင်းကြိုင်လိုက်ဝင်ကာ တံခါးပိတ်လိုက်သည်…. ချိုချို နောက်သို့ ပြန်လှည့်ပြီး…..
ဦးမင်းကြိုင် ချိုချို ခါးကို ဆွဲဖက်ကာ သူ့ရင်အုပ်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်ပြီး…. ချိုချို နဖူးကို ငုံနမ်းနေရင်းနဲ့…. ရေချိုးခန်းတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ကာ…. ချိုချိုကို ရေချိုးခန်းထဲတွန်းချလိုက်သည်…..
ချိုချိုမှာ ရေချိုးဇလုံးဘေးတွင် ခွေလှဲကျသွားသည်….. ဦးမင်းကြိုင် သူ့ပုဆိုးနဲ့ အဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲ ကိုယ်လုံးတီးဝင်လာပြီး ချိုချိုကို ချိုင့်မှ ဆွဲမကာ နံရံကို မျက်နှာမူစေပြီး ဖိ၍တွန်းကပ်လိုက်သည်…..ပြီး အပေါ်မှ ရေပန်းကို ဖွင့်ချလိုက်တော့ ချိုချို တကိုယ်လုံး ရေစက်များ စိုကုန်လေသည်…. နောက်ကနေ ချိုချိုရဲ့ ရေစို ကောက်ကြောင်းကိုကြည့်ရင်း…..အားမရသည့်ပုံစံဖြင့် ခေါင်းတစ်ချက်ရမ်းကာ…. ချိုချိုကို ပွေ့ချီလိုက်ပြီး…. ရေချိုးဇလုံးထဲကို ပစ်ချလိုက်ပြန်သည်….
အမလေး…. ဦး…. ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ….. ချို အရိုးတွေကျိုးကုန်ပါဦးမယ်…….
ဦးမင်းကြိုင် ရေချိုးဇလုံးဘေး ထိုင်ချလိုက်ပြီး…. ရေချိုးဇလုံးထဲက ပြူးပြဲ၍ ထလာတဲ့ ချိုချိုရဲ့ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အပေါ်ကို ဆွဲမလိုက်ရာ….. ချိုချိုအောင် တအားအားနဲ့ အသံကုန်အော်ဟစ်ကာ မတ်တပ်ရပ်လျက်ဖြစ်သွားသည်….. ဦးမင်းကြိုင်သည် ချိုချို ဆံပင်တွေကို ဆွဲစု စုတ်ကိုင်ပြီး မြှောက်မထားလျက်ပင်ရှိ၍….. ချိုချိုအောင်မှာ အသံကုန်အော်ဟစ်နေသည့်အသံတိတ်သွားကာ တဟင့်ဟင့်ရှိုတ်သံများနှင့်အတူ ဦးမင်းကြိုင်အား ကြောက်ရွံနေသော မျက်ဝန်းများနှင့်လှန်ကြည့်နေသည်…. ဦးမင်းကြိုင်သည် ချိုချိုအောင်မျက်နှာကို သေချာစိုက်ကြည့်ရင်း ပါးတွေကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် နှစ်ချက် အားနဲ့လွဲရိုက်ပစ်ပြီး ဆံပင်ကို လွတ်ချလိုက်သည်…. ပါးလွဲရိုက်လိုက်သည့် အရိုန်ကြောင့် ချိုချိုအောင်သည် ရေချိုးဇလုံးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားပေါ် မှောက်ကျသွားလေသည်…. ချိုချိုအောင်ရဲ့ အောက်ပိုင်းသည် ဇလုံထဲတွင်ရှိနေပြီး….ဗိုက်မှာ ဇလုံးနှုတ်ခမ်းပေါ်တင်နေကာ အပေါ်ပိုင်းသည် ဇလုံ၏အပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်နေပြီး ​မှောက်ခုံကြီး ဖြစ်နေသည်…… ရှည်လျားလှသောဆံပင်များသည် ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပုံကျနေသည်…..လက်နှစ်ဘက်က ဇလုံကို ကိုင်ထားကာ မျက်နှာအောက်ငုံလျက် တဟင့်ဟင့်ဖြင့် ရှိုက်ငိုနေလေသည်…..
ရေချိုးဇလုံထဲတွင် ​မှောက်ခုံအနေအထားနှင့် ထိုးထောင်ထွတ်နေတဲ့ သေးသေးကျစ်ကျစ်နဲ့ ချိုချိုအောင် ဖင်ကို ကြည့်ရင်း….. ချိုချိုအောင်ကို ပြန်ဆွဲထူလိုက်ပြန်သည်….. ပြီး နံရံကို ဖိကပ်ကာ အပေါ်မှ ရေပန်းကို ဖွင့်ချလိုက်သည်….ချိုချိုအောင်ရဲ့ဂုတ်ကို ဖိထားတာ ရေစက်မှုန့်တွေအောက်က ရေစိုကောက်ကြောင်း အားရပါးရ ကြည့်နေလေသည်…..ငယ်ထိပ်မှ ခြေဖဝါးထိ စိုရွဲနေတဲ့ ချိုချိုအောင်…..အနက်ရောင် ဆံပင်ရှည်ကြီးက ကျောလယ်ထိ ဖြန့်ကျနေသည်…… ဆံပင်တွေကြားက အဝါရောင် အကျီက ရေစိုစွတ်ပြီး ကျောပြင်ကို ကပ်နေရာ…. ကျောအလယ်တွင် ရင်ဘက်တစ်ခုလုံးကို စုဆုတ်ချည်ထားတဲ့ ဘော်လီကြိုးလိုင်းက ချိတ်ထားတဲ့ ချိတ်တွေပါမြင်နေရအောင် ထင်းနေပြီး…. ပုခုံးပေါ်က သွယ်ကျလာတဲ့ ကြိုးနှစ်ချောင်းပါ ဆံပင်တွေကြားက နေကြာအကျီအဝါရဲ့အောက်မှ ဖောင်းကြွနေသည်…… ခါးအောက်ပိုင်းမှာတော့ ပုံမှန်အနေအထားနဲ့ကို ခါးကို ကျစ်နေအောင် ဆွဲစုပြီး ခါးကျပ်ချုပ်ထားလို့ ခါးအလှက အူးယားစရာကောင်းနေခဲ့တာ…. ခု ရေစိုနေတော့ အစမှာ ပိုကျုံသွားပြီး…. သွယ်ဆင်းနေတဲ့ ချိုချိုအောင်ရဲ့ ခါးအလှကို ပလွားခြားပြီး ကြည့်နေရသည့်အတိုင်းပင်…..
ခါးအောက်က ဖင်တွေကတော့ သာမာန်မိန်းမတွေထက် သေးသည်ဟု ထင်ရပေမယ့်…. ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့် တောင့်တင်းနေသည်….. ထမိန်က အထက်ဆင်မပါပဲ အနားလုံးကာ ချိတ်နဲ့ဖြစ်သည်….. ရေစိုကာ ဖင်ပေါ် တင်းကပ်နေတဲ့ အဝါရောင် နေကြာပန်းထမိန်ရဲ့အောက်မှာ…. ဖင်လုံးသေးသေးလေးတွေရဲ့ တဝက်ကျော်ကျော်လောက်ကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ အနားလုံး နှစ်လိုင်းက ဖင် တစ်ဖက်တစ်ခြမ်းဆီမှာ ထင်းနေလေသည်…. ထို ဘစ်လိုင်းနှစ်လိုင်းသည် ပေါင်အထက်နားဆီမှ ဖင်တဝက်ကျော်ကို ပြေးဆင်းလာပြီး ပေါင်နှစ်ခုအလယ် ချိုချိုအောင် သောက်ဖုတ်ကို ဖုံးအုပ်ရန်အကွာအဝေးဖြင့် စုဝင်သွားပုံကို ပါးလျနေတဲ့ ထမိန် အဝါရောင်အောက်တွင် ထင်ရှားစွာမြင်နေရသည်….. ဘစ်အရောင်ပင် ခရမ်းရောင်ဟု ယူဆရအောင်ထိ ပါးလျနေသည်…..ဖင်လုံးရဲ့ အောက်မှာတော့ သွယ်တန်းဆင်းသွားတဲ့ ပေါင်လုံးနှစ်လုံး….. ထမိန်ပေါ်က နေကြာပန်း အနက်ရောင်လေးကတော့…. မလန်းနိုင်ရှာတော့……
ဦးမင်းကြိုင်သည် ချိုချိုအောင်ရဲ့ နောက်ပိုင်းရေစိုအလှကို သေချာစေ့စေ့ကြည့်ပြီး ဖင်လုံးများကို ဖိဆုပ်ချေကာ တဖြည်းဖြည်းဖြင့်….ခါးကို ဖက်လိုက်ပြီး နံရံနှင့် ကပ်နေတဲ့ ချိုချိုအောင်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်….. ချိုချိုအောင်….. နာမည်နဲ့ လိုက်ပါသည်….. ဖင်သေးပေမယ့် နို့ကြီးတွေကတော့ သာမာန်လူတွေကြား ထင်ရှားနေသည်….. နို့တွေနယ်ရင်း….ဖင်ကို လီးနဲ့ပွတ်သပ်ပေးကာ…. ဦးမင်းကြိုင်က ချိုချိုအောင်အား……
ချိုပဲ ရေချိုးချင်တယ်ဆိုလို့ ဦးက ရေချိုးပေးတာလေ….ရေချိုးတာမဝသေးရင် ထပ်ချိုးပေးမယ်လေ….
ဟုတ် ဦး သမီးတော်ပြီး…..
ဦးမင်းကြိုင်သည် ချိုချိုအောင် ဆက်ခနဲ ကောက်ပွေ့ချီမကာ ရေချိုးခန်းထဲကထွတ်လာပြီး ကုတင်ပေါ် ပတ်လက် ပစ်ချလိုက်သည်…… ပြီး တစ်ဆက်တည်း ချိုချိုအောင် ဗိုက်ပေါ်ခွထိုင်လိုက်ပြီး…. အကျီတွေကို စုတ်ဖြဲပစ်သည်…… အကျီနဲ့ဘော်လီအောက်က မနည်းကြီးမားတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးထွတ်လာတော့ ဦးမင်းကြိုင် ငုံ့ကာ စို့လိုက် နယ်လိုက် ဖျစ်လိုက်နှင့် စိတ်ကြိုက်လုပ်နေရင်း….. ထမိန်ချိတ်ကို ဖြုတ်ကာ တွန်းချွတ်ချလိုက်သည်…. ဦးမင်းကြိုင် တစ်ချက်ပြန်ထကာ အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူထင်တဲ့အတိုင်း ဘစ်မှာ ခရမ်းရောင်လေး…. တခါတည်း ချွတ်လိုက်သည်…. အားး…. လုံးဝထင်မထား…. ချိုချိုအောင် သောက်ဖုတ်က လုံးဝ ပြောင်လက်နေသည်…. သောက်ဖုတ်ကိုကြည့်ရင်း လီးကြီးမှာ ပိုတင်းပြီး ပိုမာလာသည်…. ဦးမင်းကြိုင်သည် လီးကို သောက်ဖုတ်ဝတေ့ပြီး နို့တွေစုတ်ချေကာ ဖြောင်းခနဲ့ ဆောင့်လိုးချပစ်သည်…..
ဗြစ်…. ဖွတ်….. အား…….
ချိုချိုအောင် ကော့တတ်သွားလေသည်…. ဦးမင်းကြိုင်သည် ချိုချိုအောင် အော်နေသည်ကို ဂရုမစိုက်…..သူ့ဆန္ဒ အတိုင်းပင် ချိုချိုအောင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲကားပြီး အားရပါးရ စိတ်ကြိုက် ဆောင့်လိုးနေပေတော့သည်….
လပြည့်နေ့နေလည်က နပတ ဟိုတယ်တစ်ခုက အခန်းတစ်ခုတွင် တစ်ယောက်သောသူက ကတော်တစ်ယောက်ကို ဇိမ်ပြေနပြေ ဖုတ်ခဲ့စဉ်က… ထိုကတော်မှ သူ့ယောက်ျားရဲ့ အစီအစဉ်အချို့ကို ရင်ဖွင့်ခဲ့လို့ ထိုသူက ကတော်ကို ဖင်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး သမီးတော်ကိုပါ တတ်လိုးရန် ဟိုတယ်မှ အိမ်တော်ကို ပြန်လာစဉ် စာရေးသူအား အကြမ်းဖျင်းပြောပြခဲ့သော ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါသည်……
ယနေ့မနက် အပ်ဒိတ်အနေ့ဖြင့်…..အတွင်းသတင်းအရ…. အထက်ပါ နေကြာအားလုံး မည်သူမှ ရုံးမတတ်ကျကြောင်း…. ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ အဆောင်ပတ်ဝန်ကျင်က cctv အသိုင်းအဝန်းမှ ၎င်းတို့ အိမ်သာတတ်ရင် ကြာကြောင်း…. အိမ်သာထဲက ပြန်ထွတ်လာတိုင်း ချွေးတွေပြန်နေတတ်ပြီး မျက်နှာတွေ ရှုံ့မဲ့နေတတ်ကျကြောင်း…. မနေ့ကနေလည်လောက်မှစပြီး အိမ်သာသွားတတ်ရန် အရမ်းကြောက်နေကျလို့ ဝမ်းချုပ်စေတဲ့ အစားများသာ စားသောက်နေကျကြောင်း….. ထပ်မံသတင်းရရှိခဲ့ပါသည်….
လပြည့်နေ ညမတိုင်ခင် သူဌေးတစ်ယောက်ကြောင့် ဘဝပြောင်းကာ ချမ်းသာသွားပြီးဟု သတင်းရရှိခဲ့သည့် ချိုချိုအောင် တဖြစ် ချိုချိုဝင်းအား မနေ့ညက ဘိတစ်ခုတွင် ဧည်သည်ထိုင်စောင့်နေသည့်အထဲတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု သတင်းပေးလာသူလည်း ရှိလာပြန်ပါသည်…..
ရက်ကြာသွားရင် သတင်းဆိုတာ အပ်ဒိတ်နဲ့ဖုံးသွားပြီး သမိုင်းစာအုပ်သာ ဖြစ်တတ်သောကြောင့်…အချိန်မနှောင်းခင်လေး သတင်းတစ်ပုဒ် အဖြစ် တင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်…….
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဇာတ်ကွက် အသေးစိတ်မပါဝင်ခဲ့သော နေကြာတွေအကြောင်းကိုတော့ စာဖတ်သူတို့ လိုရာဆွဲပြီး တွေးတောကြည့်ပါတော့….။
(မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ… တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် ထိုသူတွေအကြောင်းကို ဒဲ့ရေးခြင်းသာဖြစ်သည်)
အမျှင်တန်းသော ချစ်ခန်း (စ/ဆုံး)